२०७५ चैत ३ आइतबार, रोल्पा । छोराले मात्र बुबाआमालाई दागबत्ती दिने र किरिया बस्नु पर्छ भन्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै रोल्पाकी एक महिलाले आमाको किरिया बसेकी छन् । ६४ वर्षको उमेरमा आमा दिलसरी घर्तीको मृत्यु भएपछि माडीगाउँपालिका–३ तालवाङकी २२ वर्षीया लक्ष्मी घर्ती मृतक आमाको किरियामा बसेकी छिन् । ... बाँकी अंश»
धनकुटा कांग्रेसको जिल्ला सम्मेलन जेष्ठ पहिलो साता
२०७५ चैत ३ आइतबार, धनकुटा । नेपाली कांग्रेस धनकुटको जिल्ला सम्मेलन आगामी जेष्ठ पहिलो साता गर्ने नेपाली कांग्रेस धनकुटाले जनाएको छ । नेपाली कांग्रेस धनकुटाले सात वटै पालिकाका, दुवै क्षेत्र र जिल्लाको सम्मेलन आगामी जेष्ठ पहिलो साता सम्म गर्ने जनाएको छ। ... बाँकी अंश»
पत्रकार दियालीमाथि आक्रमणमा संलग्नलाई पक्राउको माग गर्दै र्‍याली
२०७५ चैत ३ आइतबार, सर्लाही। पत्रकार सोम दियालीमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्नेहरुलाई पक्राउगरी कानुनी कारवाही गर्न माग गर्दै आइतवार सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवामा दबाब र्‍याली निकालिएको छ । सामुदायिक रेडियो सर्लाही हरिवनमा कार्यरत पत्रकार दियालीमाथि आक्रमण भएको एक महिना भन्दा बढी समय भैसक्दा समेत घटनामा संलग्नहरु पक्राउ नगरेपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घ सर्लाही शाखाको आयोजनामा दोषीलाई पक्राउको माग गर्दै र्‍याली निकालिएको हो । ... बाँकी अंश»
गुल्मीमा कांग्रेसको ऐतिहासिक सम्मेलन, सभापति लगायत नेताहरुले सम्बोधन गर्ने
२०७५ चैत ३ आइतबार, गुल्मी। नेपाली कांग्रेस गुल्मीले ऐतिहासिक प्रथम जिल्ला सम्मेलनको तयारीलाई तिव्रता दिएको छ । गुल्मी कांग्रेसले यहि चैत्र १६ र १७ गते भव्यताका साथ जिल्ला सम्मेलन गर्न लागेको हो । यसअघि गर्ने भनिएको सम्मेलन पार्टीको महासमिति बैठकका कारण केन्द्रीय नेताहरुको अनुपस्थित हुने देखिएपछि स्थगीत भएको नेपाली कांग्रेस गुल्मीले जनाएको छ । ऐतिहासिक प्रथम जिल्ला सम्मेलनलाई निकै महत्व र चसोको रुपमा हेरिएको, सम्मेलनबाट सिङ्गो कांग्रेसलाई अझ मजबुत र एकतामा ल्याउन राष्ट्रिय रुपमै सन्देश प्रवाह हुने बताईएको छ । ... बाँकी अंश»
रमिते भीरमा लागेको आगो गाउँ पस्यो, आधादर्जन घर जलेर नष्ट
२०७५ चैत ३ आइतबार, पाँचथर । पाँचथर जिल्लाको हिलिहाङ्ग गाउँपालिका वडा नं ३ साविकको पञ्चमी गाविस वडा नं. ३ डाँडेको रमिते भन्ने भीरमा लागेको आगो गाउँ पस्दा ६ घर जलेका छन् । ... बाँकी अंश»
सत्ताधारी नेकपा छाडेर पाल्पाका सयौं युवा कांग्रेसमा प्रवेश
२०७५ चैत ३ आइतबार, पाल्पा । जिल्लामा नेपाली काँग्रेसमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरुको लहर नै चलेको छ । सत्ताधारी नेकपा र अन्य पार्टी परित्याग गरी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गर्ने युवाहरुको लर्को लागेको हो । ... बाँकी अंश»
सल्लाघारीको चौर पुनः नापजाँच हुने
२०७५ चैत २ शनिबार, भादगाउँ। भक्तपुर नगरपालिका–१, सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको खुला चौरको पुनः नापजाँच हुने भएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापति र नेपाल ट्रष्टका सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीच शुक्रबार सम्पन्न भेटघाटमा सो जग्गाको क्षेत्रफल एकिन गर्न पुनः नापजाँच गर्ने सहमति भएको हो । ... बाँकी अंश»
बिराटनगरको खानेपानीका लागि जापानी संस्था जाइकाले लियो चासो
२०७५ चैत १ शुक्रबार, विराटनगर। विराटनगरमा स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापनका विषयमा विराटनगर महानगर र जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाका प्रतिनिधिहरुबीच शुक्रवार विराटनगरमा छलफल भएको छ। ... बाँकी अंश»
गलकोटका सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा
२०७५ चैत १ शुक्रबार, बागलुङ । बागलुङको एक संस्थाले होली मेलाको अवसरमा सिसिटभी क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ । घुम्टे युवा परिवार गलकोट नगरपालिका ७ मल्मले समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सदरमुकाम बाहिर सार्वजनिक स्थलमा पहिलो पटक संस्थाले सिसिटिभी जडान गर्न लागेको अध्यक्ष थम्मन थापा सन्देशले जानकारी दिए । ... बाँकी अंश»
कमिसनको खेलमा ११ योजनाको एउटा उपभोक्ता समिति
२०७५ चैत १ शुक्रबार, खोटाङ । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको जन्तेढुंगा गाउँपालिकाले अलग–अलग उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्नु-गराउनुपर्नेमा ११ वटा योजनाका लागि एउटा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरेको पाईएको छ । उपभोक्ता समिति गठन निर्देशिका विपरित एउटा उपभोक्ता समितिमार्फत २८ लाख ५० हजारको ११ योजना सञ्चालन गरेर काम सुरु गरेको पाईएको हो । ... बाँकी अंश»
८३ बर्षीया बनिन् नेपाली नागरिक
२०७५ चैत १ शुक्रबार, स्याङ्जा । स्याङ्जाको ईलाका प्रशासन कार्यालय वालिङका प्रमुख दामोदर शर्माले ८३ बर्षीया टिकाकुमारी थापालाई नागरिकता दिलाईदिएका छन् । गल्याङ् नगरपालिका ८ निवासी थापालाई नेपाली नागरिकता दिलाएपछि उनी बल्ल नेपाली नागरिक बनेकी छन् । थापाका श्रीमान नैनासिंह गाहा मगर भारतीय सेनामा कार्यरत रहदा भारतमै बसोवास गर्दै आएकी थिईन् । नेपाल आइरहेपनि उनले नेपाली नागरिकता लिएकी थिइनन् । २०४० सालमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि पनि उनी भारतमै बसोवास गर्दै आएकी थिइन् । ४ छोराकी आमा थापालाई जेष्ठ छोराको नातीले सनाखत गरेर नागरिकता पाएको ईलाका प्रशासन प्रमुख शर्माले बताए । ... बाँकी अंश»
धवलागिरि अञ्चलभर यसकारण हुँदैछ दुई दिन विद्युत् सेवा ठप्प
२०७५ चैत १ शुक्रबार, पर्वत । विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका लागि साविक धवलागिरि अञ्चलमा दुई दिन विद्युत् सेवा ठप्प पारिने भएको छ । ... बाँकी अंश»
बाँदर समाउने नयाँ प्रविधि सफल बन्दै, एकैदिन २१ बाँदर खोरमा
२०७५ चैत १ शुक्रबार, पर्वत । पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले बाँदर समाउन स्थानीय प्रविधिको विकास गरेको छ । बाँदर नियन्त्रण अभियान थालेको गाउँपालिकाले स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी एकै दिन दर्जनौंको सङ्ख्यामा बाँदर समाउन सकिने बनाएको हो । ... बाँकी अंश»
कार्यालय सहयोगीको भरमा गाउँपालिका, कर्मचारी विवाह खान
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, खोटाङ । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका कर्मचारी कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्यालय छोडेर विवाहमा गएको पाईएको छ । वुधबार कार्यालय समयमा कार्यालय सहयोगीको भरमा कार्यालय छोडेर गाउँपालिकाका मनोनित सदस्य अमृत बहादुर विश्वकर्माको छोरीको विवाहमा गएको पाईएको हो । ... बाँकी अंश»
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, खोटाङ । सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका दुई जना विद्यार्थी नेता नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको आस्था र विचारप्रती आफू सहमत भएको भन्दै आफ्नो पार्टी परित्याग गरी उनीहरु कांग्रेसमा आएका हुन् । ... बाँकी अंश»
२५ वर्षदेखि सेवारत ‘ओके बाजे’ लाई पाल्पालीद्वारा तेस्रो पटक अभिनन्दन
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, पाल्पा । पूर्वी पाल्पाको ग्रामिण वस्तीमा पच्चीस वर्षदेखि सेवारत जापानी नागरिक काजुमासा काकिमी ‘ओके बाजे’लाई बिहिबार तानसेनमा अभिनन्दन गरियो । उनलाई आज तानसेनमा एक समारोहका अभिनन्दन गरिएको हो । ओकेबाजेले वि.सं. २०४९ सालदेखि पाल्पामा सामाजिक, शैक्षिक तथा अन्य सुधारात्मक क्षेत्रमा सक्रियताका साथ योगदान पुर्‍याएकोले उनलाई अभिनन्दन गरिएको आयोजकले जनाएको छ । यसअघि दुईपटक अभिनन्दित भएका ओकेबाजेको यो तेस्रोपटको अभिनन्दन हो । आकेबाजेलाई उनकै नामबाट गठित नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समिति पाल्पाले अभिनन्दन गरेको हो । ... बाँकी अंश»
मुलुककै लागि उदाहरणीय जनप्रतिनिधि
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, गलेश्वर । जनताले दिएको मतबाट निर्वाचन जितेपछि आफूलाई सर्वशक्तिमान ठानेर जनमतको बेवास्ता गर्दै आफू अनुकूलका काम गर्ने भनेर जनप्रतिनिधिको आलोचना भइरहेका बेला म्याग्दीका केही जनप्रतिनिधिले आफै अगुवा बनेर उदाहरणीय काम गरेका छन् । ... बाँकी अंश»
यात्रुलाई ओरालेर बसमा आगजनी, तीन जना पक्राउ
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, धनगढी। कैलालीको बडैपुरमा बसमा बिहानै आगजनी गरिएको छ । आगजनीबाट बस जलेर पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । ... बाँकी अंश»
बिस्केट जात्रा भब्य बनाउन कार्यदल गठन
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, भादगाउँ । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्काः (बिस्केट) जात्रा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण तवरले सम्पन्न गर्न विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय बुद्धिजीवी र संस्कृतिप्रेमीको भेलाले भक्तपुर नगरपालिका प्रमुख सुनिल प्रजापतिको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय विशेष कार्यदल गठन गरेको छ । ... बाँकी अंश»
ज्वाइँ मार्ने ससुरालाई दश वर्ष कैद सजाय
२०७५ फाल्गुण ३० बिहिबार, सप्तरी । छोरीज्वाइँको हत्या आरोपित राजविराज नगरपािलका–९ मलेठका ५२ वर्षीय रामदयाल साहलाई अदालतले १० वर्ष कैदसजायको फैसला गरेको छ । ... बाँकी अंश»